စားဖိုမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်၌ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပြီး သိရှိလိုက်နာရန် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အသိပညာအချက်အလက်များ | Food Magazine Myanmar
စားဖိုမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်၌ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပြီး သိရှိလိုက်နာရန် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အသိပညာအချက်အလက်များ
ဒီလမှာ “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ့ “Chefs Education Page” မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်တာကတော့ စားဖိုမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်မှာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပြီး သိရှိလိုက်နာရန် လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အသိပညာ အချက်အလက်များအား ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လမှာ စားဖိုမှူးများအတွက် သိရှိလိုက်နာရမယ့် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံ အကြောင်းအချက်များကို ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ဒီလ မှာတော့ လုပ်ငန်းခွင် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်။
လုပ်ငန်းခွင် သန့်ရှင်းရေးလို့ဆိုရာမှာ အရေးပါပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် သိရှိလိုက်နာရမယ့် အချက် (၃) ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေက တော့-
(၁) လူသုံးကုန်၊ စားသောက်ကုန်များ၏ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ခြင်း။
(၂) လုပ်ငန်းခွင်သုံးနှင့် စားဖိုဆောင်သုံး ကိရိယာပစ္စည်းများ၏ သန့်ရှင်းခြင်း။
(၃) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဧရိယာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်များကို အသေးစိတ်ထပ်မံ ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) လူသုံးကုန်၊ စားသောက်ကုန်များ၏ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ခြင်း
ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသော ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေ့စဉ်အသုံးပြုသည့် စားသောက်ကုန်များ ဖြစ်ကြသော အရည်မျိုးစုံနှင့် အသား၊ ငါး၊ အသီးအရွက်မျိုးစုံ၊ အသီးအနှံမျိုးစုံ၊ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အဆီမျိုးစုံတို့ကို အောက်ပါအတိုင်း နေ့စဉ်စိစစ်လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချက်တွေကတော့-
(က) စားသောက်ကုန် အများစုအား ရေခဲသေတ္တာအတွင်း မှန်ကန်သော အပူချိန်ရှိစေရန် သေချာစွာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားရမည်။
(ခ) နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများအား အချိန်နှင့်အမျှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုရှိ၊ မရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးရမည်။
(ဂ) စားသောက်ကုန်များကို ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ရေခဲသေတ္တာအပြင်ဘက် စတိုခန်း အတွင်း၌ဖြစ်စေ ကြမ်းပြင်ပေါ်ချထားခြင်းနှင့် နံရံများတွင် ကပ်မှီထားခြင်းများ လုံးဝရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
(ဃ) ရေခဲသေတ္တာနှင့် ရေခဲအေးခဲခန်းအတွင်း သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမည့် စားသောက်ကုန်များအား လေလုံစွာဖုံးအုပ်ပြီး သိုလှောင်သိမ်းဆည်းသင့်ပါသည်။
(င) ရေခဲသေတ္တာအတွင်း သိုလှောင်သိမ်းဆည်းသည့်အခါ ချက်ပြုတ်ပြီး စားသောက် ကုန်များအား အပေါ်ဘက်တွင်ထားရှိပြီး မချက်ပြုတ်ရသေးသော စားသောက် ကုန်များအား အောက်ဘက်တွင် ထားရှိသိမ်းဆည်း ရပါမည်။
(စ) သတ္တုဘူးသွတ်စားသောက်ကုန်များ၊ ဆီသွတ်ဘူး အသင့်စား စားသောက်ကုန်များအား ပွန်းပဲ့ပေါက်ပြဲနေခြင်း၊ တိုက်စားသွားခြင်း ၊ ပုံသဏ္ဌာန်မမှန်ခြင်းများ ရှိ၊ မရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးရပါမည်။
(၂) လုပ်ငန်းခွင်သုံးနှင့် စားဖိုဆောင်သုံး ကိရိယာပစ္စည်းများ၏ သန့်ရှင်းခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်သုံးနှင့် စားဖိုဆောင်သုံး ကိရိယာပစ္စည်းများသည် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဗက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ အဓိက သယ်ဆောင်ပျံ့နှံ့စေနိုင်သော အရင်းအမြစ်နေရာများ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်သုံးနှင့် စားဖိုဆောင်သုံး ကိရိယာပစ္စည်းများအား သေချာစွာ ဆေးကြောသန့် စင်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စေသော အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် စားဖိုဆောင် သုံးကိရိယာ ပစ္စည်းများကို ဆေးကြော သန့်စင်ရာမှာ အောက်ပါအချက်များအား လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
(က) ကိရိယာပစ္စည်းများ သန့်စင်ရန် ပြင်ဆင်ရာတွင် အစားအစာများ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ် စဉ်က ဖိတ်စဉ်ပေကျံကပ်ငြိနေခဲ့သော အကြွင်းအကျန်များအား ဦးစွာခြစ်ထုတ်ဖယ်ရှား သန့်စင်ရပါမည်။
(ခ) ကိရိယာပစ္စည်းများအား အဓိက သန့်စင်ဆေးကြောရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဆပ်ပြာအမှုန့်၊ အခဲ၊ အဆီများဖြင့် အပူချိန် ၅၀ မှ ၆၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်တွင် ဆေးကြောသန့် စင်ရပါမည်။
(ဂ) ရေနွေးဖြင့် အပူချိန် ၈၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်နှင့် အထက်တွင် ဆပ်ပြာများ သေချာစွာ သန့်စင်စေရန် အနည်းဆုံး ၂ မိနစ် မှ ၃ မိနစ်ခန့်အထိ ဆေးကြောရပါမည်။
(ဃ) ရေနွေးငွေ့ (သို့) လေပူဖြင့် ခြောက်သွေ့စေရန်နှင့် ရေခန်းခြောက်ပြီးမှ အဝတ်ခြောက် အသန့်ဖြင့် ပြောင်လက်အောင် တိုက်ချွတ်ရပါမည်။ ဟိုတယ်အများစုတို့ကတော့ ၈၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အပူချိ်န်ရှိသည့် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် သန့်စင်ကြပါသည်။
(င) ကိရိယာပစ္စည်းများကို ကြမ်းပြင်တွင် တိုက်ရိုက်ချထားပြီး အသုံးပြုခြင်းများ လုံးဝမပြုလုပ်ရပါ။
(စ) ကိရိယာပစ္စည်းများ မတော်တဆ ကြမ်းပြင်နှင့် ထိမိခြင်း၊ ပြုတ်ကျခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့ပါက ချက်ချင်း ဆေးကြောသန့်စင်ရပါမည်။
(ဆ) ကိရိယာပစ္စည်းများတွင် ချက်ပြုတ်ပြီး အစားအစာများနှင့် မချက်ပြုတ်ရသေးသည့် အစားအစာများအား ပူးတွဲချက်ပြုတ်ခြင်းများ လုံးဝမပြုလုပ်ရပါ။
(ဇ) အစားအစာများ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်သည့် ကိရိယာပစ္စည်းများအား အမှိုက်ပုံးနှင့် နီးစပ်သည့် နေရာများတွင် လုံးဝနေရာချ သုံးစွဲခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။
(ဈ) အစားအစာ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်သည့် အရွယ်အစားကြီးမားသော ကိရိယာပစ္စည်း များ၏ အောက်ခြေဘက်နှင့် ကျောဘက်တို့ကို အထူးဂရုပြု သန့်စင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၃) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဧရိယာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဧရိယာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးကိုလည်း အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး မည်မျှပင် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံပါသော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၊ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တို့ သန့်ရှင်းမှု မရှိပါက ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော လုပ်ငန်းခွင် မဖြစ်နိုင်ပါ။ စားသောက်ကုန်နှင့် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးပြည့်စုံရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၊ အပြင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးသည်လည်း ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများ ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ရန် အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း၊ အပြင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးအတွက် အောက်ပါအချက်များအား အခြေခံအဖြစ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
(က) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှင့် ပြင်ပဧရိယာများရှိ အမှိုက်ပုံးများအား သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် အမှိုက်ပြည့်သည်နှင့် အမှိုက်အိတ် ချက်ချင်း လဲလှယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(ခ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှင့် ပြင်ပဧရိယာများရှိ အမှိုက်ပုံးများအား အချိန်ပြည့် အဖုံးသေချာစွာ ဖုံးအုပ်ထားရပါမည်။
(ဂ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ကြမ်းပြင်ဧရိယာ အားလုံးအား ဆေးဆပ်ပြာဖြင့် ပုံမှန်ကြမ်းတိုက်သန့်စင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(ဃ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှင့် အပြင်ဧရိယာများ၏ အမှောင်ကျသော နေရာများ၊ အလင်း ရောင် အားနည်းသော နေရာများအား အထူးဂရုပြု၍ သန့်ရှင်းထားရပါမည်။
(င) စားသောက်ကုန်များ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းသည့် နေရာများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၊ ပြင်ပဧရိယာများအား ပိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေးရည်များ ပုံမှန်ပက်ဖျန်းသန့်စင် ပေးရပါမည်။ အသုံးပြုသော ပိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေးတို့ကို စားသောက်ကုန်များနှင့် မထိမစဉ်စေရန်လည်း အထူးသတိပြု လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
(စ) ကြီးမားသော ကိရိယာပစ္စည်းများအား ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် တိကျမှန်ကန်သော အချိန်ဇယားဖြင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(ဆ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှင့် ပြင်ပဧရိယာရှိ ရေဆိုးမြောင်းများနှင့် မြောင်းကွေ့များအား အချိန်ပြည့် ဖုံးအုပ်သန့်စင်ထားရပါမည်။
(ဇ) လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ပြတင်းပေါက်များနှင့် လေဝင်လေထွက်ပေါက်တို့ကို ပိုးမွှားများ မဝင်နိုင်စေရန် ပိုက်စိပ်ဆန်ခါနှင့် လုံခြုံစွာပိတ်ထားရန်နှင့် လေဝင်၊ လေထွက် ကောင်းမွန်စေရန်လည်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၊ အပြင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးများနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြေခံလိုက်နာဆောင် ရွက်ရမည့် အချက်များဖြစ်ပါတယ်။ လာမည့်လတွေမှာလည်း လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့အသုံးချ အခြေခံအချက်အလက်များကို “Myanmar Chefs Development Centre, MCDC” ရဲ့ “Chef Education Page” မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ဖတ်ရှု လေ့လာမှတ်သား လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်း … Meet you at MCDC Yangon !!! BeaChef by yourself !!!
♦ Chef Sunny ♦